Fepetra fampiatoana fianarana: tsy ampy boky ny isan-tokantrano | NewsMada
Fepetra fampiatoana fianarana: tsy ampy boky ny isan-tokantrano
Andro vitsivitsy izay ny tsy nidiran’ny mpianatra ny varavaran-tsekoly noho ny antony fifampitsinjovana eo amin’ny samy mpiara-belona, vokatry ny fisian’ny otrikaretina Covid-19. Maro ireo torohevitra mipoitra etsy sy eroa, hoentin’ny zaza malagasy « mandany ny tontolo androny ». Miverimberina matetika ny filalaovana « jeux vidéo », ny fampiasana ny ordinatera sy izay mifandraika amin’izany, sns. Tsy ratsy akory ireo fa somary hadino ny famakiana boky. Tsy voaresaka firy io. Ny antony? Taratry ny fanaovana tsinontsinona ny tontolon’ny boky tao anatin’ny taona maro eto Madagasikara.
Talohan’ny ny taona 1980, raha vao midonana-poana ny ankizy, voateny avy hatrany amin’ny hoe: « mandraisa boky »! Taorian’io, ilay boky horaisina mihitsy no tsy ampy mba tsy hilazana hoe tsy nisy. Tsy tazana firy rahateo tao amin’ny tontolon’ny fampianarana any an-tsekoly ny fampiasana ny boky. Nanomboka nahazo vahana ny « pôlikaopy » na ilay fanaovana dika mitovy ireo taratasy misy ny lesona.
Nihamaivan-danja ny boky. Hadino tanteraka ny maha « loharano tsy ritra » azy ireny. Nanomboka nihasarotra ihany koa vao nahatafavoaka boky iray… Ny niafarany? Zara raha ahitana boky ny tokantrano malagasy iray.
… Izao vanim-potoana izao anefa no tena ilaina ny boky. Harembe sy sakafon-tsaina sy sakafon’ny fo ary ny fanahy tsy hita noanoa no azo raha mamaky boky ao anatin’ny 15 andro ny olona iray!